I-Omsk Law Academy yoMnyango Wezangaphakathi: isithombe nokubuyekezwa
Imfundo:, Amakolishi namaYunivesithi
Kuzo zonke izikhungo eziphakeme zasezemfundo zaseRussia i-Omsk Law Academy ayifuni nje kuphela ngenxa yemfundo ephezulu, kodwa futhi indawo enenzuzo. Isakhiwo, esihlala eyunivesithi, sinomlando omangalisayo ohlobene eduze nendlela yokuphila namasiko aseSiberia aseCossa.
I-Omsk Law Academy eKorolenko, 12, ihlala ekwakheni i-Military Chancellery yaseSiberia eCoscope Army. Iyunivesithi yokuhweba yasungulwa ngo-1998, okokuqala yayinesimo sesikhungo, kodwa ngo-2012 saqanjwa kabusha esikoleni ngemuva kokudlula ngempumelelo ukugunyazwa.
Phakathi nawo-2000, i-OmAIA yaqala umtholampilo wezomthetho wokuqala, lapho abafundi beyunivesithi bangathola khona amakhono asebenzayo. Ukubaluleka komphakathi kwalesi sikhungo nakho kuhle: abafundi banikeza izeluleko zomthetho ezakhamuzi ukuthi, nganoma yisiphi isizathu, azivikelekile emphakathini ngezizathu zomthetho.
Ngemva kokuthola isimo se-Academy, eyunivesithi yaqala ukukhula ngokwengeziwe, futhi izinga lemfundo lihlala ezingeni eliphezulu elifanayo. Abafundi be-OmAUA bahlala bethola izibonelelo kanye nezifundiswa kuzo zonke izinsuku zokuphila kwalesi sikhungo, futhi ngaphezu kwalokho, eyunivesithi inokuma okuhle noMnyango Wezemfundo weRussia Federation ngenxa yamaphrojekthi ayo amaningi.
Iyini lesi sikhungo?
I-Omsk State Law Academy ihlanganyela ekuqeqeshweni kwabasebenzi abaqeqeshiwe emkhakheni wezomthetho, wezezimali kanye nentela, futhi lapha ukuthi uhulumeni ozayo kanye nabasebenzi bomasipala bathola imfundo . Kusukela ngo-2015, i-OmAU ingenye yezikole ezine zezomthetho ezweni. Lona ukuhlolwa okwenziwe ku-Academy nguMnyango Wezemfundo we-Russian Federation.
I-yunivesithi idlula isikhathi sokugunyazwa kombuso futhi iqinisekisa iziqu zayo kwi-Association of Lawyers of the Russian Federation. Iziqu ze-Academy zivame ukuthatha izikhundla eziphakeme kule nhlangano, futhi esikhathini esizayo zidlulisela okuhlangenwe nakho okuyigugu kubalandeli babo. Umsunguli we-Academy i-LLC "Ama-YUS-amaqembu", kuze kube nguSeptemba 2012 lo msebenzi wenziwa yiSisekelo soKhuthazwa kweSayensi neMfundo yezezomthetho.
I-Omsk Law Academy: izinkomba
Kusukela ngo-2015, i-OmAU iqeqesha ochwepheshe bamazinga ahlukahlukene. Lapha ungathola kokubili imfundo ephakeme yezemfundo futhi uphinde ufunde kabusha i-postgraduate. Kuze kube manje, i-Academy inezindawo ezine zemfundo: ukuphathwa, ukuphathwa kombuso kanye nomasipala, ezokwezomnotho, umthetho wezomthetho. Ngamunye wabo ungathola iziqu ze-bachelor. I-degree ye-master ikhona kuphela ekuqondeni "I-Jurisprudence".
Eyunivesithi kukhona nesifundo se-postgraduate, lapho noma yikuphi umuntu oqeqeshwe iziqu angangena ngokuncintisana ngemuva kokudlula izivivinyo zokungena. Abameli abahamba phambili base-Omsk naseSiberia, abaneminyaka eminingi abanolwazi nokuzijwayeza, bafundisa esikoleni esiphakeme. Iningi labafundisi beyunivesithi baneziqu ze-academic, ngenxa yalokhu, izinga eliphezulu lokufundisa ukuqeqeshwa lifinyelelwa.
Abasebenzi bezinkantolo zedolobha, abashushisi, uMnyango Wezangaphakathi, omeli kanye nochwepheshe abaningi abahlali abahlanganyele emakilasini. I-Academy inezinsiza zayo zokwaziswa, ezivumela ukuba zihlanganyele masinyane nabalingani bazo ezivela kwezinye izifunda futhi zenze amaphrojekthi ahlangene.
I-Omsk Juridical Academy, iKomidi Lokumemezela elisebenza phakathi kukaMeyi no-Agasti, ngonyaka uthola abafundi abangaba ngu-200. Ukwamukelwa, kuzodingeka uthumele ikhomishana amaphepha amaningi: ikhophi yepasipoti kanye neyokuqala, ikhophi yesitifiketi sesikole (noma idiploma) kanye neyokuqala, izithombe ezimbili 3 x 4.
Kukhona neminye imibhalo eyengeziwe. Lezi yizincwadi eziqinisekisa ukuguqulwa kwegama (uma likhona), ukutholakala kwempumelelo eyodwa (ngokuvamile kuvuthwe kwiphothifoliyo eyodwa), kanye nalesi sitifiketi, ngokusho ukuthi izunivesithi kufanele ziqaphele imfundo ekhona yangaphandle (uma ikhona ).
Umfakisicelo angakwazi ukuletha amaphepha emuntwini. Uma kwenzeka engakwazi ukwenza lokhu ngesizathu esithile, unelungelo lokuthumela wonke amaphepha afanele ngeposi elibhalisiwe. Kulesi simo, kubalulekile ukwenza uhlu lokutshalwa kwezimali, futhi ukuqinisekisa ukuthi incwadi izofika ngesaziso. Kuphela kulezi zincwadi imibhalo yomfakisicelo izokwamukelwa yikhomishini. Akuvunyelwe ukuthumela amaphepha ngemali ekulethwa kwezidingo, ngeke zamukelwe.
I-Omsk Law Academy, amaphuzu adlula lapho ayaziwa khona kuphela ekupheleni kukaMeyi, ngonyaka uhlanganyela emncintiswaneni wokwabiwa kwezihlalo zesabelomali kanye nokuxhaswa kwesabelomali. Naphezu kokuthi iyunivesithi ayiyona inzuzo, ibuye inelungelo lokubamba iqhaza kumcimbi onjalo, noma ngabe inani lezindawo zebhajethi lihluka njalo ngonyaka. Ukucacisa lolu lwazi kungcono kakhulu ehhovisi le-admissions leyunivesithi.
Ngo-2015, i-OmAU ithole izindawo ezingu-49 zebhajethi, ezingu-39 zazo ezinikezwa isiqondisi "I-Jurisprudence", kanye no-10 - "Umnotho". Ngesikhathi esifanayo, ingxenye yezihlalo zaya kubafundi bezifundo zokuxhumana. Ngo-2014, eyunivesithi yakwazi ukuthola izindawo ezingu-34 kuphela, okubonisa ukuthi ukuqhuma kwabafundi esikoleni kuyanda njalo ngonyaka.
Ukuze uthole olunye ulwazi, ungaxhumana neKomidi Lokungeniswa Kwe-Academy, elise: ul. Korolenko, 12. Uma ungakwazi ukuvakashela eyunivesithi, ungaxhumana nekhomishini ngocingo: +7 (3812) 51-09-60; +7 (3812) 51-09-58. Abasebenzi bomsebenzi wesikhungo emasontweni kusuka emahoreni angu-9 kuya kwangu-18, nangomgqibelo - kusukela ngo-10 ukuya ku-14.
Kuzo zonke izifunda, i-Omsk Law Academy yoMnyango Wezangaphakathi inikeza izifundo ezengeziwe ezizosiza ukulungiselela ukungena nokudlula zonke izivivinyo ezidingekayo. Othisha be-Academy bancoma ukuba baye emakilasini kulabo abahlela ukudlula izivivinyo zangaphakathi zokungena, ezenziwa yiyunivesithi (ulimi lwesiRussia, izibalo, ukomnotho, umthetho nomphakathi, izifundo zomphakathi nomlando).
Abahlanganyeli bezifundo bazolalela amahora angama-20 kwisifundo ngasinye, izindleko eziphelele zokuqeqesha kuzoba ngama-ruble angu-1900. Zonke amakilasi ahlinzekanga nje kuphela ukutadisha izinto ezidingekayo nokuya ezifundweni, kodwa futhi nokudlulisa ukulawula kokungena, kanye nokwenza ukuhlolwa kokugcina, okufana nalawo anikezwe ekuhlolweni kokungena. Azikho izikhathi ezithile zokuqalwa kweqembu, lonke ulwazi luvela njengeqembu labalaleli.
I-Omsk Law Academy iphinde inikeze nethuba lokuba wonke umuntu aphinde abuyele ku-CPC & P. Kuthuthukiswa ochwepheshe beyunivesithi izifundo kukuvumela ukuba uthole imfundo eyengeziwe hhayi kuphela kubantu abadala, kodwa nakwabantwana. Izindleko eziningiliziwe zokuqeqesha nokutholakala kwezifundo ezidingekile zingacaciswa ngocingo lokuxhumana: +7 (3812) 37-68-55.
Labo abangazange bakwazi ukufaka izindawo zebhajethi bangase bazame ukujwayela eyunivesithi ngesisekelo esengeziwe. Izindleko zonyaka kulokhu zizohlukahluka kuye ngokukhethekile okukhethiwe kanye nendlela yokuqeqesha. Emnyangweni wesikhathi esigcwele, inzuzo eningi ukutadisha okukhethekile "Izilimi", ngo-2014 izindleko zamasonto amabili (unyaka) kwakuyi-ruble eyizinkulungwane ezingu-45, ezibiza kakhulu - ngokukhethekile "I-Jurisprudence" (ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-74 ngonyaka).
Uma sikhuluma ngokuxhumana, "I-Jurisprudence" (ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-42 zonyaka ngonyaka ka-2014) ibuye iholele lapha, eshibhile iyobiza ukuqeqeshwa kulezi zici ezilandelayo: "I-Psychology", "I-Business Informatics", "Ibhizinisi Lezohwebo" (25,000 ngonyaka ngonyaka 2014). I-Omsk Law Academy iphinde inikeze izinketho zokufunda ibanga, kodwa lokhu kusebenza kuphela ekukhethekile "I-Jurisprudence", futhi izindleko zokuqeqesha ngonyaka ngonyaka ka-2014 zikhona ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-30.
Abafundi be-postgraduates bafunda emnyangweni wesikhathi esigcwele kuzodingeka bakhokhele ama-ruble angu-55 000 minyaka yonke, nabafundi be-part-time - 40,000. Bonke labo abahlela ukuthola imfundo eyengeziwe yokufundela i-postgraduate, kuyodingeka futhi bakhokhele, amanani lapha ahluka kusuka kuma-ruble angu-30 kuya ku-60 ayizinkulungwane (kuye ngokuthi ukukhethwa okukhethiwe).
I-Omsk Law Academy, okubuyekezwa kwayo ihle kakhulu, inikezela bonke abafundi bayo ithuba lokuqeqeshwa komuntu siqu, kodwa nokukhula komuntu siqu. Eyunivesithi minyaka yonke kukhona "Umfundi Spring", kanye nemincintiswano ehlukahlukene lapho umuntu angakwazi khona ukuhlanganyela.
Abaphothula iziqu ze-OmAIA inothi lokuthi banikezwe isisekelo sezobuchwephesha kakhulu, umtapo wolwazi uqoqe ulwazi olufanele kakhulu kuzo zonke izifundo ezidingekayo, zonke izethameli zihlonyelwe ubuchwepheshe bamuva. Abafundi begumbi baphinde baqaphele ukuthi inyuvesi ingacwaningwa ngesikhathi esigcwele, ngezinye zeziyalo ezikude, okulula kakhulu kulabo abahlanganisa umsebenzi nemfundo.
Izikhungo eziphakeme zezemfundo zaseRostov-on-Don: ezohwebo nezombuso
I-CCU - izici, amakhono, iziqu ezidlulayo. I-Penza State University
Kungani amehlo abomvu, futhi kanjani ukuqeda ubuhlungu?
Medicine "Artroker": analogue, imfundo, incazelo izibuyekezo izidakamizwa
Iqhwa - ebalulekile Contemporary Interior
Kungani ngiphethwe yikhanda futhi uzizwe ugula?
I-Cyprus: I-Protaras. Ukuvakasha kwe-resort encane esiqhingini sase-Aphrodite
Amathiphu alula ukuthi ungahlakulela kanjani amandla
Indlela wean iluma Ferret ekhaya: ngempumelelo izindlela, amasu kanye nokubuyekeza